ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါစေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« သူတို့ ယုံကြည်လို့ အဝတ်စုတ် တိုင်ပတ်ပြီး ကိုးကွယ်ချင် ကိုးကွယ်မယ်။ ရွှံ့ပုံ ကို အမြတ် တနိုးထားပြီး ထိုင်ရှိခိုးချင် ခိုးမယ်။ ဒါလူတိုင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေး ဖြစ်တယ်
ကို ထင် feeling ကိုယ်ချင်းစာနိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပါစေ
ယိုးဒယားလိပ်ကျွန်း လူသတ်တရားခံလို.အစွပ်စွဲခံရတဲ့ရွှေ.ပြောင်း ဗမာလုပ်သားလေးနှစ်ယောက်အတွက် ကာကွယ်ပြောဆိုကြပြီးတရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုကြတဲ့အထဲမှာ သူ.နိုင်ငံသားတွေနဲ. သတင်းမီဒီယာတွေပါ ပါဝင်နေတဲ့ကိစ္စအပေါ် သူတို.နိုင်ငံသားတွေရဲ.ကြောင်းကျိုးဆီလျော်စွာ ဆင်ဖြင်စဉ်းစားနိုင်မှုဟာ သူတို.တိုင်းပြည်ရဲ. ပညာရေးကြောင့်လို.ထောက်ပြပြောဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုကိုတွေ.လိုက်ရပါတယ်။ တစ်ဆက်ထဲဘဲ ဗမာပြည်ပညာရေးမှာ အခမဲ့မသင်မနေရအခြေခံပညာကိုတောင်မှ သင်ခွင့်မရ၊ သင်ခွင့်ရငြားသော်လည်း ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ.ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုကို အားမပေးလှတဲ့စံနစ်အပေါ်ရင်မောမိပြီး ဓားစာခံ ကျောင်းသားကလေးသူငယ်များအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
အကယ်၍သာအခုလိုအလားတူကိစ္စမျိုး ဗမာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လိုများတုန်.ပြန်ကြလေမလဲ၊ သိချင်လိုက်တာဗျာ
ကဲ … ဇာတ်လမ်းစပြောကြည့်မယ်ဗျာ၊
အသက် (၂၀) ကျော်ဘင်္ဂါလီကောင်လေးနှစ်ယောက်ဟာ ငပလီနားက ငါးပိ ငါးခြောက်လုပ်ငန်းမှာ လာပြီးအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ တရုတ်သမီးရည်းစားလေးနှစ်ယောက် ငပလီကတည်းခိုခန်းတစ်ခုမှာ သူတို.အပေါင်းအသင်းတရုတ်လေးများနဲ.လာရောက်လည်ပတ်၊ စားသောက်ကြပြီး၊ နောက်တစ်နေ.မနက်မှာ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအတွက် စစ်တွေရဲစခန်းအမှုကိုင်ရဲအရာရှိက သီတင်းတစ်ပါတ်အကြာမှာ
ရွှေ.ပြောင်းလုပ်သား ဘင်္ဂလီလေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီး စစ်ဆေးပြီး လူသတ်တရားခံအဖြစ်ဝန်ခံကြောင်း အတည်ပြုလိုက်ပါတော့တယ်။
– ငါ -ိုးမသားဘင်္ဂါလီတွေ တစ်ခါတည်းရိုက်သတ်ပစ်လိုက်
– ဖြစ်မှာပေါ့ ဘင်္ဂါလီတွေ ဒီလောက်များနေတာ
– ဒီကောင်တွေကြောင့် မငြိမ်းချမ်းတာကွာ
– ခွေးကုလားတွေရှိနေသမျှ ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေမှာဘဲ
– မြန်မာထလော့ ထလော့မြန်မာ (ကျိုးနေလျင်ထိုင်နေပါ)
– –ီးကုလားတွေ စောက်ကျင့်ကိုယုတ်တယ်
– ဒါကြောင့် ၉၆၉ ကသိပ်အရေးကြီးတယ်
… စသည်ဖြင့် တုန်.ပြန်ကြလေမလား
– မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ.ကိုပေးပို.ကြပါ
– နိုင်ငံတကာကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ပြည်ဝင်လေ့လာခွင့်ပေးကြပါ
– တရားခံလို.မသေချာမခြင်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေမစွပ်စွဲကြပါနဲ.
– ဆဲတာဆိုတာခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရင့်ရင့်သီးသီးမလုပ်ကြပါနဲ.
– လူသားတစ်ဦးအဖြစ် နောက်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ကျခံချိန်အထိ အခွင့်အရေးရပါစေ
တကယ်တော့ ကိုယ့်အသားထိမှနာတတ်တယ်ဆိုရင် လူမဟုတ်လို.ပါဘဲ။
– သေမှခင် လူတွင်မကျင့်အပ် ရယ်လို.တော့ အဆုံးအမခံခဲ့ဖူးပါသဗျာ ။ ။
(မှတ်ချက်။ ။ စာကိုသေသေချာချာမဖတ်ဘဲနဲ. ဘင်္ဂါလီလော်ဘီဆိုပြီး ဆဲကြမှာတော့မြင်ယောင်သေးမိတော့တယ်။ ဆဲရင်တော့ဘလော့ခ်မှာပါ။)
This entry was posted on October 23, 2014 at 9:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.